Nucleus accumbens သည် D2 နှင့် D1 receptor ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောအလတ်စား spiny neurons များကိုမော်ဖင်းအထွက်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်စူးရှသော morphine တို့မှရွေးချယ်သည် (2012) - Your Brain On Porn
နျူကလိယအလတ်စား spiny အာရုံခံဖော်ပြ D2 နှင့် D1 အဲဒီ receptor ရွေးချယ်အသီးသီးမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာနှင့်စူးရှမော်ဖင်းအကိုက်နေဖြင့် (2012) activated နေကြသည် accumbens
Neuropharmacology ။ 2012 Jun;62(8):2463-71.
Enoksson T က, Bertran-Gonzalez J ကို, ခရစ် MJ ။
ဦးနှောက်နှင့်စိတ်သုတေသနအင်စတီကျု, ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်, NSW 2006, သြစတြေးလျ။
Opioids ထိရောက်သော analgesic အေးဂျင့်များဖြစ်ကြပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောသည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာအဖြစ်အလေးအနက်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ opioid မှီခိုဖို့အထောက်အကူနှင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်။ Opioid ဆုတ်ခွာမြောက်မြားစွာဦးနှောက်ဒေသများကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့် အဆိုပါ ventral striatum အတွက်အာရုံခံ၏ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့် activation ၏ဖိနှိပ်မှုများပါဝင်သည်.
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်စူးရှသော opioids dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်.
ဆုတ်ခွာကဲ့သို့ပင်စူးရှသော opioids လည်း ventral striatal အာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေဆုတ်ခွာနှင့်စူးရှ opioid လုပ်ရပ်များအားဖြင့် activated စေခြင်းငှါအကြံပြုသည် ventral striatum အတွက်အာရုံခံသက်ဝင်စေပါ။
ဤတွင်အဆိုပါလှုပ်ရှားမှု-related ချက်ချင်း-အစောပိုင်းဗီဇ, က c-Fos များအတွက်နဲ့ Immunofluorescence မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာနှင့်စူးရှမော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့် activated ventral striatal အာရုံခံ၏တိကျသောလူဦးရေလေ့လာဖို့ confocal microscopy အားဖြင့် Transgene သတင်းထောက် mouse ကိုလိုင်းများအတွက်လေ့လာခဲ့သည်။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ပြီးနောက်က c-Fos immunoreactivity ၏ naloxone-precipitated ဆုတ်ခွာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုးမြှင့်စကားရပ်, အများစုအတွက်နျူကလိယ accumbens (NAc) ၏ D2-receptor (D2R) အလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs) တွင် core နဲ့ shell ကိုတိုင်းဒေသကြီးများ။ ဆနျ့ကငျြဘ, တစ်ဦးခြင်းအားဖြင့် မော်ဖင်းအကိုက်တစ်ခုတည်းဆေးထိုးသီးသန့် NAc ၏ core နဲ့ shell ကို၏ (D1R) MSNs ဖော်ပြ D1-receptor အတွက်က c-Fos immunoreactivity activated ။ ဤရလဒ်သည်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာနှင့်စူးရှမော်ဖင်းအကိုက်တုံ့ပြန်အတွက် NAc ၏ MSNs ၏နှစ်ခုလူဦးရေအတွက်ဖြစ်ပေါ်အာရုံခံတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဒီကဗျာအသားအရောင်ခွဲခြားထုတ်ဖေါ်။